Qaxooti Gaaraya 3502 qof oo Soo Gaaray Dekeda Magaaladda Boosaaso [Sawirro] | SAHAN ONLINE
Qaxooti Gaaraya 3502 qof oo Soo Gaaray Dekeda Magaaladda Boosaaso [Sawirro]
Waxaa soo gaaray shalay galab Dekeda Magaaladda Boosaaso Markabka Nawaal 3 oo dalka Yemen kasoo qaaday Qaxootigii ugu tirada badnaa ee soo gaara magaaladda tan iyo markii ay dagaaladu ka bilowdeen dalkaas.
Dadka qaxootiga ah ayaa tiradooda lagu sheegay 3502 qof oo isugu jira Carruur,haween,dhalinayaro iyo dad waayeel ah,waxaana loo muujiyey iney dib ugu soo laabteen dalkooda iyo Shacab soo dhaweyn looga bartay.
Dadkan qaxootiga ah ayaa loo fidiyey gargaar dhinac walba ah sida daaweyn iyo cunto oo ay ka qayb qaadanayeen shaqaalaha Caafimaadka,waxaana ammaan weyn mudanaa Ciidanka ilaalada Dekeda oo caawinayey dadkan.
Madax kala duwan oo ka tirsan Xukuumada,maamulka gobolka Bari kan degmada Boosaaso,Saraakiil Ciidan iyo Laamaha Caafimaadka ayaa kusoo dhaweeyey Dekeda weyn ee magaaladda Boosaaso.
Mas’uuliyiinta gobolka Bari kan degmada Bosaso iyo Guddiga Gurmadka dadka Qaxootiga ah ee Yemen oo warbaahinta la hadlay ayaa soo dhaweyn u sameeyey dadkan,iyagoona sheegay dhulka ay joogaan in uu yahay dhulkooda cidna aysan ka xigin.
Dawladda Puntland oo marar badan ka hadashay soo dhaweynta dadka walaalahooda ah ee ka imaanaya dagaalada dalka Yemen ayaa sheegtay in dadkaas waajib tahay in Taakuleyn loo fidiyo.
Tan iyo markii uu bilowday dagaalka dalka Yemen ,waxaa Puntland soo gaarayey dad tira badan oo Soomaaliyeed kuwaas oo ay taageero u fidisay dawadda Puntland iyo shacabkeeda.